Dagaallo Iyo Qaraxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Dagaallo Iyo Qaraxyo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
calamada September 2, 2018 2 min read
Howlgaladan oo isugu jira dagaal toos ah iyo qaraxyo waxey ciidamada Mujaahidiinta la beegsadeen saraakiil iyo maleshiyaat ka tirsan dowlada Federaalka waxeyna weeraradan ka kala dhaceen goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Weerarka Kowaad oo ah dagaal toos ah waxey ciidamada Ku qaadeen goob fariisin u ah maleeshiyaatka Murtadiinta waana Halka loo yaqaano Samraan oo ka tirsan xaafada Suuqa Xoolaha degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Goobtaas waxaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday Hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga Maqlalayay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
Howlgalka Labaad oo ah qarax waxaa lala beegsaday gudoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyadda maamulka Murtadiinta ee gobalka Shabeelada hoose,waxa uu qaraxan si gaar ah kaga dhacay qeybo ka mid ah Xaafada Dabakaya Madow ee degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho.
Sarkaalka la beegsaday ayaa lagu magacaabaa Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle kaasi oo si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa la doonayay in isaga lagu dila balse waxaa qaraxa ku dhaawacmay Labo Murtad kale oo isaga la socotay.
Howlgalka Saddex-aad oo isagana qarax ah ayaa waxaa lala beegsaday Xarunta degmada Waabari,iyadoo dhawaaqa qaraxa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi.
Xilliga qaraxa waxaa gudaha xarunta ku sugnaay saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada,lamana xaqiijin khasaaraha uu geystay qaraxaasi.
Weeraradan ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Muqdisho ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Shisheeyaha iyo Murtadiinta ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho.
Previous: Warar Dheeraad Ah Oo Weeraro Lala Beegsaday Askar Itoobiyaan Ah.
Next: Qarax Culus Oo Ka Dhacay Degmada Howlwadaag.